निर्मला आन्दोलनका घाइते उपचार खर्च माग्दै धर्नामा
माेहन विष्ट ,????????
२०७६ पौष १७ बिहीबार १२:२८:००
माेहन विष्ट, ????????
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको न्यायिक आन्दोलनको क्रममा घाइते भएकाहरुले उपचार खर्चको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
आफ्नो लाखौँ रकम खर्च हुँदा समेत सरकारले उपचार खर्च नदिएको भन्दै घाइतेहरुले बिहीबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । घाइतेहरुले जिल्ला प्रशासनको मुल गेटमा दुई घण्टा धर्ना दिएका छन् । सरकारले उपचार खर्च नदिएको भन्दै उनीहरुले प्रशासनकै मुल गेटमा धर्ना दिएका हुन् ।
आन्दोलनमा घाइते भएका चेतन भट्टले उपचार गर्न पैसा नदिएको र पैसा नहुँदा आफ्नो उपचार हुन नसकेको भन्दै पढाई छाडेर धर्नामा बसेको बताए । गोली लागेर खुट्टा नै गुमाउनु परेका अर्जुन भण्डाराकी आमाले सरकारले जिवन निर्वाह खर्च दिएपनि उपचार खर्च नदिएका कारण आन्दोलनमा आएको बताइन् ।
घाइतेहरुले उपचार खर्च सुनिश्चितता नभए आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । निर्मलाको न्यायको समेत माग अघि सारेका छन् । १० साउन २०७५ मा निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएपनि अझैसम्म पनि हत्यारा पत्ता लागेको छैन ।
#निर्मला पन्त # बलात्कारपछि हत्या # आन्दोलनका घाइते # धर्ना
निर्मला पन्त हत्या प्रकरण : पूर्वएसपीसहित आठ प्रहरीलाई सफाइ
निर्मला पन्त हत्याकाण्ड : प्रहरीविरुद्ध परेका दुई मुद्दा फैसला, अदालतद्वारा आठ प्रहरी निर्दोष ठहर
‘इनफ इज इनफ’का अभियन्ताद्वारा महेन्द्र पुलिस क्लबअगाडि धर्ना
निर्मला पन्त हत्याको दुई वर्ष पूरा : अपराधी अझै फेला परेन
नेकपा केन्द्रीय सदस्यले दिए पार्टी कार्यालयमा धर्ना
सिन्धुपाल्चोकको लिदिमा भीषण पहिरो, २१ घर पुरिए
पहिरोले त्रिभुवन राजपथ अवरुद्ध, एक बेपत्ता, चार गाडी पुरिए
माथिल्लो दोर्दी 'ए' ले भदौ ३ देखि साधारण सेयर निष्कासन गर्ने